Fadhiyada qaloocan, isbeddel dhan oo lagu qurxiyo qolka fadhiga | Bezzia
Maria vazquez | | Dharbaaxo, Isbeddellada qurxinta
Khadadka tooska ah iyo curyaaminta ayaa had iyo jeer ku tartamaya dareenka qurxinta gudaha. Sanadihii la soo dhaafay, khadadka qalooca ayaa ka shaqeynayay sidii ay tartanka uga adkaan lahaayeen waxayna sidaas ku sameynayaan iyagoo sharad ku jira qaababka organic iyo sinuous si loo helo muuqaal weyn. Mid ka mid ah jibbaarada ugu weyn ee isbeddelkani waa fadhiga fadhiga.
Fadhiyada qaloocan waxay caan ku noqdeen sannadkii hore ilaa ay noqdeen isbeddel, wax walbana waxay muujinayaan in ay noqon doonaan dhammaan cadhada 2022. Iyada oo guud ahaan dhabarka hooseeya iyo tones ecru, safafyadan waxaa loogu yeeraa inay qurxiyaan qolal aad u kala duwan, laga bilaabo classic ilaa casriga casriga ah. . Ma ku dhiiratay inaad ka dhigto qaybta ugu muhiimsan qolkaaga fadhiga?
1 Astaamaha fadhiga fadhiga qaloocan
Astaamaha fadhiga fadhiga qaloocan
Naqshadayaasha sida Jean Royere, Design Piero Lissoni, Vladimir Kagan iyo Pierre Yovanovitch waa qaar ka mid ah naqshadeeyayaasha kuwaas oo caan ku ah qaabkan fadhiga fadhiga ee sameeya. si fudud oo dareere badan wadahadal kasta, sida ay sameeyaan miisaska wareega.
Xadhkaha siman iyo kor u kaca yar ee dhulka ka sarreeya ayaa siinaya fadhigan a iftiinka iyo bilicda qurxoon. Sidaa darteed, inkastoo ay ku dhiiradeen, waxay la qabsadaan dhammaan noocyada kala duwan ee deegaanka: casriga ah, retro, casriga ah ama classic, sida aad ku arki karto sawirada.
Heerarka qallooca ee fadhiyadan, iyo sidoo kale qotodheerkooda, ayaa si aad ah ugu kala duwan hal nashqad mid kale. Si kastaba ha ahaatee, dhammaantood waxay leeyihiin astaamo ay wadaagaan. Inta badan waxaa lagu sameeyaa hal gabal iyo Dhulka ayay ka kacaan Thanks to lugaha yar yar ama, inta badan, dhufto ee. Waxa lagugu dabooli karaa walxo macdan ah ama isla marada loo isticmaalo in lagu hagaajiyo fadhiga fadhiga.
Sifada kale ee ay wadaagaan fadhiga qalooca badankoodu waa a dhabarka hoose. Tani waxay ku socon kartaa fadhiga fadhiga dhinac ilaa dhinac ama way baaba'aysaa cidhifkeeda, sida tusaalooyin badan oo sawirka kore ah. Waxaan shaki ka qabnaa in qaar ka mid ah kuwan dhabarka ay ku raaxaysan doonaan; Ma qiyaasi kartaa inaad madax ku dhufato mid iyaga ka mid ah?
Wax kasta oo qaababka naqshadeynta fadhigaaga qalloocan, waa inaad maskaxda ku haysaa in ay ku haboonaan doonto qolka fadhiga iyada oo ay ugu wacan tahay shakhsiyaddeeda. qol kaas oo waxay ku dari doontaa firfircooni iyo qoto dheer hadba meesha aad joogto.
Fadhiyada qaloocan sida fadhi kasta oo kale ayaa lagu heli karaa agab kala duwan oo kala duwan. Nakhshado gaar ah waxaad yeelan doontaa erayga ugu dambeeya marka la eego dharka dharka. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto wax kasta oo ku yaal fadhigaaga cusub isbeddellada ilmaha Waxaa jira laba walxood oo ay tahay inaad fiiro gaar ah siiso:
dhogor goglan. dhogorta boucle waa isbeddel wayna sii ahaan doontaa. Waa dhar ka samaysan dhogor leh siddo yaryar oo alpaca fiber ah, oo mas'uul ka ah jilicsanaanta jilicsan iyo sifada yar yar. Waxaad ka heli kartaa iyaga oo leh dhumucyo kala duwan; qaar aad u jilicsan oo aad dareemi doonto inay ku dahaadhan yihiin markaad fadhiga ku fadhiisato. Diirimaad iyo soo dhawayn, maaddadani waxay jilcisaa quruxda casriga ah ee fadhigaas.
Dhar jilicsan. Velvet ma aha isbeddel laakiin had iyo jeer waa beddel weyn oo lagu daro xarrago qol kasta. dhogorta dhogorta leh ee fadhiga cad-cad oo ku dhiirranow maro jilicsan oo midabyo cawlan ama caan ah sida kuwa aan hoos ku xusi doono.
Haddii aan ka hadalno isbeddellada, fadhiga fadhiga ee midabada iftiinka ah ayaa xukumaya. Labada cod ee cad cad oo dhalaalaya iyo, gaar ahaan codadka cayriin Fadhiyadani waxay iftiimin doonaan qolkaaga fadhiga. Isbeddelku wuxuu nagu martiqaadayaa inaan ku darno barkimo wareeg ah oo isku mid ah si aan u siinno sumcadda silhouette, laakiin haddii aad rabto in aad ku darto midabka guud ahaan, barkinku had iyo jeer waa beddel wanaagsan oo sidaas lagu sameeyo.
Miyaadan jeclayn dhawaaqyadan fudud? Ma waxaad raadinaysaa wax ka sii dhib badan oo u adkaysta fikradaha iyo imaatinka maalinba maalinta ka dambaysa? Ma rabtaa inaad midab ku darto qolka fadhiga fadhiga? Kadibna waxaa jira midabyo ay tahay inaad si dhab ah u tixgeliso. midabadaas ayaa ah buluug, cagaar iyo casaan, kuwa ugu caansan ee noocaan oo kale ah laakiin aadan ku qasbin inaad xaddiddo naftaada.
Ma jeceshahay fadhiga fadhiga? Ma ku dari lahayd qolkaaga fadhiga mise aad ayey ugu dhiiran yihiin dhadhankaaga? Wali aad loogama caan baxay guryaheena sababtoo ah ma jirin wax la heli karo oo dimuqraadiya, laakiin wax walba way yimaadaan!
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Qurxinta » Isbeddellada qurxinta » Fadhiyada qaloocan, oo ah isbeddel lagu qurxiyo qolka fadhiga